Mariin kun:- Mariin hayyota Tigraay 1300 ol hirmaachisu har’a Maqalee keessatti eegalameera – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsMariin kun:- Mariin hayyota Tigraay 1300 ol hirmaachisu har’a Maqalee keessatti eegalameera
Mariin kun: -Mariin hayyota Tigraay 1300 ol hirmaachisu har’a Maqalee keessatti eegalameera. Hayyonni Tigraay kun kutaa addunyaa gara garaa keessaa kan walitti waamamanii dha. Mariin kun guyyoota 5f kan walitti fufee geggeeffamu yoo tahu kaayyoon isaa guddaan hayyoota keessumattuu dargaggoota Tigraay gara dhaaba TPLFitti hawachuu dha. Marii kana haasawaan kan banan pirezdaantiin naannichaa Dr. Dabra Tsiyoon Gabra Mikaa’eel ”TPLF dhaaba hayyota dargaggoo Tigraay” jechuun isaaniis dhagahameera. Kaayyoon dhaabichaa inni guddaan dargaggootaan of bakka buusaa deemuu dha jechuun jala muran. Mariin kun dhimma misoomaa fi siyaasaa Tigraay irratti kan maryatu tahuun eerameera. Yeroo kanatti godhamuun isaa ammoo muddaa yeroo ammaa seenan kanaaf furmaata barbaaduuf akka tahetti tilmaamama. Hafuura marichaa wanni ibsu yoo waraabamee gadhiifame jala buunee hordofna
“Yeroo darbe “Taayee Danda’aa marachuutti jira qabaa mana yaalaa geessa ” jedheen ture. Namni kun dhgumatti rakkina keessa wan gale fakaata. Akkuma saree maraatuu asiifi achi fiiguun wan argatte hundaa ciniinaa jira.
Eengada Aktivistoota Dhimmi Liyyuu Poolisii Abdi Elly kun furmaata waaraa itti laatame malee akkuma durii loltuu gidduu galchina jechuun gatii hin qabu wan jedhaniif “warra Dhiiga Oromoon Miindefametu akkas jedhe ” jechuun yakkuutti gad ta’e.
Har’a immo Hacaaluu irratti wayaaneefi ABO shaneetu qindai’naan yakka raawachuu yaale jedhe. Dhugaa dubachuuf Hojii boonsaa Hacaaluun dalagetti kan dalanne Taayeefi fakaatota isaati.
Taayeetti hangas aaruun hin barbaachisu.Tayeen bor illee Party biraa keessa seenee OPDOtti ka’a. Hanga yoona OPDO dabalatee bakka arfan tokko lixeera. Kaan hafee Amantii illee jijiira ture. Mucaan black Board dha.Yoo argattan Barrefama “OPDO” jedhu irraa haquun wan barbaadan itti barreefattu
Soba immo ni soba miti ni hanqaaqa malee. Gandummaafi Jibba isaa immo namoota isa faana mana hidhaa turan irraa addaan baafadhaa. Qoqoodinssa Oromoo irratti tokkoffa dha.Kaan hafee “Bibile” keesatti maaf maqaa Macca dhahame jedhee wolqoodinsa uumuuf dhama’aa ture dha.EVolution SIYAASA Oromoo warra hin xumurre keessa nam tokko dha namni kun.
Akaataa OPDOtti karaa Abbaa Duulaa galeefi hojii inni Activistoota, namoota KFOfi qabsa’ota Oromoo irratti hojechaa ture balin’inaan barressa jira. Na eega idduu kana. Barreffama kana keesatti namooti 10 ol ta’an ni xuqamu. Kan eeyamsiisa jira. Kan immo yeroo amma kana OPDO wan ta’aniif eeyamsiisuu hin barbaachisu
@Hailu Lelissa Oboro!